Viber manavao ny tenany amin'ny fampidirana hafatra manafoana ny tenany, fampandrenesana manan-karena ary maro hafa | Vaovao IPhone
Eo amin'ny tontolon'ny fandefasan-kafatra eo noho eo dia misy mihoatra ny WhatsApp sy Telegram, saingy izy ireo no rindranasa malaza indrindra eran'izao tontolo izao, tsy lazaina intsony ny Facebook Messenger. Viber dia iray amin'ireo sehatra fandefasan-kafatra tranainy indrindra miaraka amin'ny WhatsApp. Manana mpampiasa maherin'ny 600 tapitrisa izy izao, any amin'ny firenena arabo no tena betsaka, izay toerana tsy fantatra WhatsApp. Ankoatry ny hafatra, Viber dia mamela antsika hanao antso eo amin'ireo mpampiasa sy amin'ireo laharana an-tariby sy finday erak'izao tontolo izao, mandritra ny taona maro, izay fifaninanana mivantana indrindra an'ny Skype any amin'ireo firenena Arabo.
Ny baiko mpanatanteraka izay nambaran'i Donald Trump tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo dia nahatonga el fandavana ny ankamaroan'ny orinasa teknolojia, ireo orinasa izay ankoatry ny fanehoana ny tsy fahazoany aina dia nanao bebe kokoa tamin'ny vondron'olona voakasik'izany. Na izany aza, nanambara i Viber ny alatsinainy lasa teo ny mety hanaovana antso maimaim-poana amin'ireo firenena voarohirohy amin'ity lamina mpanatanteraka ity, izay ahafahan'ny mpampiasa mifandray amin'ny sakaizan'izy ireo maharitra.
Saingy ankoatran'io asa altruistic io dia nanangana fanavaozana vaovao ny app ho an'ny IOS sy Android i Viber ary nanampy ny fahafahan'ny mamorona resaka miafina izay manimba ny atiny voasoratra na nalefa rehetra aorian'ny fotoana voatondro. Ity fampiasa ity dia efa azo zahana amin'ny Telegram hatramin'ny nanombohany. Saingy tsy izany no zava-baovao.
Ny teknolojia 3D Touch dia nampiharina ihany koa tamin'ity fanavaozana ity izay manome ny fahafaha-manao jereo ny atin'ny chat raha tsy tafiditra ao anatiny. Ary farany, ny zava-baovao voarain'ilay fangatahana dia ny fahafahany mandefa hafatra an-dahatsary hatramin'ny 30 segondra, safidy tena mitovy amin'ilay misy amin'ny alàlan'ny Skype.
Nanampy koa ireo tovolahy avy any Viber fanohanana ny fampandrenesana manan-karena iOS 10 Ho fanampin'ny famelana anao handefa ny horonan-tsary sy sary amin'ny vahaolana am-boalohany, hialana amin'ny fiovam-po izay hataon'izy ireo amin'ny vahaolana ambany kokoa ny fampiharana fandefasan-kafatra rehetra mba hitehirizana ny tahan'ny data.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Viber fanavaozana amin'ny alàlan'ny fampidirana hafatra famafana aotomika, fampandrenesana manan-karena ary maro hafa
Ho ela velona ny sary: ​​ny iPhone 7 Plus no maodely malaza indrindra amin'izao fotoana izao
Podcast 8x20: Mamaky firaketana indray i Apple